Maitiro ekuwedzera ekunamatira matsva kuWhatsApp pane iyo iPhone | IPhone nhau
Iko kushanda kutsva kwe Zvinonamira zveIOS muWhatsApp iri pano, mune zvakapfuura zvinyorwa isu tambotaura nezvazvo pamwe neiyo nyowani GIF yekutsvaga injini iyo mameseji application pachayo yaisanganisira kune vese vashandisi. Ino nguva isu tasiiwa neinonyanya kunakidza, mukana wekuwedzera nyowani zvemukati.
Uye ndezvekuti sezvo WhatsApp ine maStickers akaisirwa natively, pamwe hauna kumbofunga kuti unogona kuwedzera akawanda sezvaunoda. Tinokuunzira iwe dzidziso yekuti ungawedzera sei maSticker aunoda kuWhatsApp pane yako iPhone zviri nyore, gara nesu uone.
Chinhu chekutanga chatinofanira kuziva ndechekuti panguva ino isu tichafanira kurodha zvimiti, asi kana zvikaita sekuvhiringidza, tinokusiya vhidhiyo iri pamusoro pamwe nematanho ese aunofanira kutevedzera kuti uzviite. Iye zvino iwe unongofanirwa kuenda kuApple App Store uye tsvaga rondedzero yeStickers yaunofarira zvakanyanya kurodha pasi.
Isu tinoenda kuApp Store uye tinotsvaga maStickers eWhatsApp uye tinosarudza zvatinoda.
Tinodhawunirodha maStickers pack
Kamwe kurodha pasi tinopinda, uye tinya pane «+ bhatani» uye iyo "Wedzera kune WhatsApp" basa
WhatsApp ichavhurwa yakanangana nesu uye isu tichawedzera maSticker.
Ndiwo maitiro ari nyore iwe aunogona kuwedzera ese maSticker aunoda, izvozvi anozoonekwa muWhatsApp mameseji bhokisi zvichienderana nezvamunoda.
Maitiro ekubvisa nekugadzirisa mapepa ekunamatira
Ehe isu tinogona zvakare kubata uye kudzima edu atovepo mapepa ekunamatira, zveizvi tinofanirwa kubaya bhatani reWhatsApp Stickers uye kamwe chete mukati tinya pane chikamu che "maStickers angu", Kudzvanya pane yega yega maStickers akasarudzwa kunotibvumira kuti tiadzime, pamwe nekushandura marongero ekuonekwa pane iyo Stickers keyboard nekukwevera kumusoro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuwedzera anonamira matsva kuWhatsApp pane iyo iPhone
Ingori iyo pack yememes ichangobviswa kubva kuAppStore !!
Apple yekugadzira mitsara inogadzira misoro zvakare yemamiriro asiri pamutemo ekushanda